ရွှေဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်. လူ့သမိုင်းတလျှောက်မှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး လဲလှယ်ပေးချေတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ ငွေကြေးအမျိုးအစားတစ်ခုပါလို့ပြောရင်လဲ မှန်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဒီအဖိုးတန်သတ္တုအကြောင်း သင်မသိသေးတဲ့ အံအားသင့်စရာ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို သင့်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်. ဘယ်လိုသတင်းမျိုးဖြစ်မလဲ?
ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာတော့ ဒီအဖိုးတန်သတ္တုကနေ အပိုဝင်ငွေတွေရှာဖွေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှိနေပါပြီ! FBSအဖွဲ့သားတွေကလဲ အဲ့ဒီနည်းလမ်းက ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးလဲဆိုတာ သင့်ကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ.
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ စနစ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးစနစ်တွေကြောင့် ရွှေရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုက အခြားသတ္တုတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ရွှေကတကယ့်ကိုပဲ ပြိုင်စံရှားအဆင့်မှာရှိနေတာပါ. ဒါကြောင့်ပဲ ရွှေကိုအရောင်းအ၀ယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဈေးကျကျ၊ တက်တက် အကျိုးအမြတ်များစွာရှိတဲ့၊ အာမခံချက်ရှိတဲ့၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနည်းတဲ့ အဖိုးတန်သတ္တုတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ခေတ်အခါမှာတော့ ရွှေသားအစစ်ကို ကိုင်ထားစရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ကာ ဈေးအတက်မှာရော အကျမှာပါ အကျိုးအမြတ်ရယူနိုင်တဲ့ အချိန်အခါကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်.
ထို့ပြင် အချက်အလက်တစ်ချို့ကို သင့်ကိုပြောပြချင်ပါသေးတယ်. ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ၁အောင်စ ၁၂၃၀$သာရှိခဲ့တဲ့ရွှေဈေးဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ ၁၂၅၀$ပေါက်ဈေးရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရင် ကမ္ဘာ့ရွှေကိုရောင်းဝယ်တာက တကယ့်ကို အကျိုးအမြတ်များစွာရနိုင်တာကို သိရပါလိမ့်မယ်! ရောင်းဝယ်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ခိုင်မာမှုရှိတဲ့ အဖိုးတန်ရွှေ မဟုတ်ပါလား?
ဒီနေ့ပဲ ကမ္ဘာ့ရွှေကို စတင်ရောင်းဝယ်လိုက်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ အမြတ်ငွေတွေရယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ မှဖြေကြားပေးဖို့ ၂၄/၇ အချိန်ပြည့် သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပါ အကူအညီပေးရန်လဲ အဆင့်သင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကို သင်မှတ်မိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ဘယ်လိုမေးမြန်းမျုမျိုးကိုမဆို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျှက်ပါ!
ကျေးဇူးတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကြောင့် အရောင်းအဝယ်အချိန်ဇယားအပြောင်းအလဲများ!
ကျေးဇူးပြု၍ နားဆင်ပါ၊ ရောင်းဝယ်သူတို့! အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကျေးဇူးတော်နေ့ကို ၂၂-၂၃ နိုဝင်ဘာတွင်ကျင်းပပါမည်။ ယင်းသည် အရောင်းအဝယ်အချိန်ဇယားတွင် အပြောင်းအလဲများဖြစ်စေလိမ့်မည်။